म्युचुअल फण्डबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता छन् लगानी सुत्र « Bizkhabar Online
म्युचुअल फण्डबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता छन् लगानी सुत्र
13 January, 2022 12:08 pm
काठमाडौं । पैसा कमाउने र बचत गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् । पैसा कमाउनकै लागि मानिसहरुले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छन । पछिल्लो समय नेपालीहरुको सेयर बजारमा आकर्षण बढिरहेको छ र केही लगानीकर्ताहरुले म्युचुअल फण्डमा पनि लगानी गरेका छन् । म्युचुअल फण्डमा बुझेर लगानी गर्न सके राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ ।
तर, म्युचुअल फण्डमा पैसा लगानी गर्नु अघि, केहि चीजहरू छन् जुन ध्यानमा राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै जसो अवस्थामा, लगानीकर्ताहरुले म्युचुअल फण्डका ‘ट्रम्स एण्ड कण्डिसन’ बारे जानकारी नभएको अवस्थामा पैसा लगानी गरेको देखिन्छ । जसले लगानीकर्ताहरु म्युचुअल फण्डबारे पछि नकारात्मक बनेको देखिन्छ । हामीले म्युचुअल फण्डमा लगानीका लागि उपयुक्त हुने केही लगानी सुत्रहरु प्रस्तुत गरेका छौं ।
सिष्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लान
सामान्यतया म्युचुअल फण्डमा बजार घट्ने बित्तिकै मानिसहरू डराउन थाल्छन् र सिष्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लान (एसआइपी) बन्द गर्छन्। यसपछि बजार बढ्न थालेपछि लगानी गर्न थाल्छन । तर, यसो गर्दा तपाईंलाई निश्चित रुपमा नोक्सान हुन्छ भने यसैका कारण तपाईंले पाउनुहुने सबै लाभहरू गुमाउनुहुन्छ। लगानी गरेपछि त्यसो गर्नु मुर्खता साबित हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले लामो समयको लागि लगानी गर्ने सोचेर सिष्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लान (एसआइपी) अनुसार म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कोष व्यवस्थापकमा ध्यान
म्युचुअल फण्डमा प्रमुख प्रबन्धकको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण कोष व्यवस्थापन टोली बारम्बार र द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ भने सावधान हुन आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले सधैं यस्तो उतारचढावमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
म्युचुअल फण्डको छनौट
लगानीकर्ताले कोषको विगतको कार्यसम्पादन धेरै राम्रो भएकाले त्यसमा लगानी गरेको धेरै पटक देखिएको छ। तर स्मरण रहोस् कि यो पटक्कै होइन, यो आवश्यक छैन कि यदि कुनै कम्पनीले पहिले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ भने भविष्यमा पनि त्यस्तै गर्नेछ। किनभने कोषको मूल्य परिवर्तन भइरहन्छ। यदि तपाइँ तीन महिना अघि यी कोषहरू सही छन् भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, त्यसपछि यो पनि हुन सक्छ कि तीन महिना पछि यसको रेटिङ तल जान सक्छ। त्यसैले यस आधारमा निर्णय लिनु गलत हो ।
कोष परिवर्तन पनि आवश्यक
यदि तपाईंले कुनै कोषमा लगानी गर्नुभएको छ र यसले लामो समयसम्म राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छैन भने, तपाईंले कोष परिवर्तन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ एक कोषबाट अर्को कोषमा लगानी गर्नुहुन्छ भने, यो धेरैपटक यो सुत्र प्रभावकारी साबित हुन्छ।